Morden anoratidza zvakare kuti vaKristu ndivo vachitambudzwa zvikuru boka.
A musungwa pakati bara akafa apo mumwe gumi musoro. Picture of Islamic State vhidhiyo.
VaKristu gumi neimwe akapfura uye musoro on Christmas Day 2019. Ndizvo shoko kubva Islamic mamiriro muNigeria kuti vanoda kupa vaKristu munyika.
lördag 28 december 2019 01:01 📧
Islamic mamiriro muNigeria
The BBC inoshuma kuti vechiIslam kufamba, vechiIslam mamiriro muNigeria kwave bara uye musoro gumi nerimwe hostages dzechiKristu.
Islamic State of West Africa Province (ISWAP), izvo zvinosanganisira vateveri Boko harami, akaita zvabudisa kunotyisa 56 vhidhiyo wechipiri.
Shamisa umhondi 11 VaKristu
Vhidhiyo inoratidza kuti shamisa umhondi gumi nerimwe vaKristu . Morden anoratidza zvakare kuti vaKristu ndivo vachitambudzwa zvikuru boka.
Film mifananidzo inoratidza varume tsvukuruka yunifomu nezvifukidziro dema shure vasungwa avete ibvi uye vakapfeka chivharo chekumeso pamberi matavi munhu pakati wokutanga uye ipapo musoro mumwe gumi.
Islamic mamiriro kuNigeria akati yaiva chikamu chacho vachangobva akazivisa Mushandirapamwe "Tsiva" mutungamiri wavo , Abu Bakr al-Baghdadi rufu ari US bvuta muSiriya muna October.
"Iri ndiro shoko vaKristu munyika yose," akadaro mumwe Masked murume ari firimu, iro akaiswa imwe panze nzvimbo zvinowanikwa zvinosanganisira.
A musungwa pakati bara akafa apo vamwe gumi vari kusundwa pasi uye musoro.
"Tiri akavauraya vari kutsiva nokuda chigaro vatungamiri vedu, kusanganisira Abu Bakr al-Baghdadi uye [chando Mutauriri] Abul-Hasan al-Muhajir," akadaro nhengo neboka nhau Unit, maererano wenhau Ahmad Salkida.
Kwoumhondi vaKristu kwakaitika musi Christmas Day akanga nemaune kuitwa nokuti mutambo wechiKristu.
Nyengeterera VaKristu Nokutambudzwa
Tinodirei kunyengeterera vaKristu munyika ndivo vachitambudzwa zvikuru boka. Unogona kufunga nezvazvo kana uchigara kuSweden kuti vaKristu vanotambudzwa kudaro. Asi vaKristu vanopondwa ose zuva.
Tinodirei kurarama pedyo naJesu. Hapana chinoratidza kuti mangwana. Asi, tinogara pedyo naJesu, ipapo takachengeteka zvodini.
VaKristu gumi neimwe musoro on Christmas Day, shoko kuvaKristu rose
Islamic State muNigeria 'beheads hostages vechiKristu'
ARI varwi kusunungurwa Video 'kuratidza musoro kuti hostages vechiKristu' muNigeria
Kuuraya rinotyisa Isis 'beheads 11 hostages vechiKristu' on Christmas Day muna kunotyisa kuurayiwa mavhidhiyo itsva muNigeria